Indlela irestyu yaseAustin ebonelela ngayo ukutya eluntwini ngexesha lesiphango sasebusika
Indawo yokutyela iphakela i-tacos, igumbo kunye nokunye ukutya okunokondla uluntu kunye nokuxhasa abaququzeleli boncedo
Njengoko isaqhwithi sasebusika eTexas saqhubeka kwaye abantu babanjiswa ngaphandle kombane, ubushushu kunye nokutya, iivenkile zokutyela zaseAustin zaqala ukuzixhasa kwaye zabonelela ngokutya kwiindawo ezikufuphi.
Indawo yokutyela iCajun Cherrywood iVic & Al ibisenziwa kwaye inika igumbo rhoqo kule veki. Le nzame ihambelana nomoya wabanini kunye nabazala uNicholas kunye noMat Patrizi, abasebenzisa indawo njengekhitshi loluntu labasebenzi kumanqanaba okuqala obhubhane wenoveli ye-coronavirus.
"Andinagunya, ke ndihlala kwindawo yokutyela kwaye nditya onke amaqanda am anetyiwa," utshilo uNicholas Patrizi. "Ke ndicinga ukuba kungcono ndenze abanye abantu bazive bonwabile kwaye banelisekile xa ndifika." Le ndawo yokutyela ilungiselele ukutya ezandleni, ezizodwa zeMardi Gras, kodwa iVic & Al nayo ifuna ukuyinika abantu indawo. Uxelele u-Yi Te: "Ingathi abantu bafuna ukutya, injongo, incoko, kunye nejelo lokonwaba."
UPartizi uqale ngokusungula i-gumbo ngoLwesibini, nge-16 kaFebruwari, kwaye kulindeleke ukuba ibambe abantu abangama-30. Ngokuchaseneyo, malunga nabantu abangama-60 kwiyure yokuqala. Waqhubeka ehamba, esongeza izidlo ezingama-250 zeembotyi zebhotolo, iimbotyi ezibomvu kunye nerayisi kwimenyu ngosuku olulandelayo, kwaye watshintshela kwizidlo ezingama-350 zerayisi edityanisiweyo ngoLwesine. Isicwangciso sangoLwesihlanu si-tentative kuba okwangoku akukho manzi kwindawo yokutyela.
EMpuma iAustin, eyona ndawo iphambili ye-taco iDisco, iNixta Taqueria kunye neCuantos Tacos badibene ukuze banike iitacos kunye neetacos zasimahla kule veki. U-Anthony Pratto, ongumnini we-Discada, uzakuqhuba itraki kule veki kwaye sele elungiselele isidlo esinegama elifanayo (inyama yenkomo, inyama yehagu kunye nemifuno ephekiweyo ngeepani yokulima) ngempelaveki. “Sikumoshelani oku kutya xa abantu abaninzi kwindawo yethu bengakwazi ukuya evenkileni, bengenawo amanzi aphuma etephini, bengenayo imali yokuhamba, okanye bengakwazi ukuthatha imoto bayokufumana ukutya? Nje?" “Kutheni singenzi konke okusemandleni ukupheka yonke into esinayo?”
Sele kukho isixa esikhulu sokutya, kubandakanya inyama malunga neentsuku ezimbini zomsebenzi eziqhelekileyo. Pratto uxubana namaqanda ali-15 esandleni sakhe; Umnini-mpahla kaNixta kunye nompheki u-Edgar Rico wabelana ngekhitshi le-kiosk kunye ne-Pratto, wapheka idada kunye ne-chili eyomileyo njenge-spare. UPratto uthe ukongeza kwii-tacos, ungenza neetacos: “Kulula kakhulu. Singenza iimbiza ezinkulu zesitokhwe sazohlula saziikomityi. ”
Iqela le-Nixta elaphuma emandleni ngobo busuku lahlala lihambelana nePrato. "Sicingile, kutheni ukuchitha ukutya kwethu xa sinokondla abantu abakufunayo?" URico kunye nomnini-nye uSara Mardanbigi uxelele uMtyi ngemiyalezo ye-Instagram.
Enye inzame yeyokuba abahlobo bancedise ekhitshini, kubandakanya uTony Curet weloli ye-pizza iDoughboys, kunye nokutya okunikelweyo, kubandakanya amaqanda angama-30 ukusuka eSouthwest Austin Brewery. Iimpawu ezinkulu, kubandakanya iDeep Eddy Vodka, iBumble, Made In kunye neBlue Norther, ikwabonelela ngeminikelo. UPratto wabelane ukuba basebenzise imali ethile yokuthenga kunye nokunika ii-hoodies.
Konke oku malunga nomsebenzi weeresityu ngokutya nayo nayiphi na into enokunceda nokubonelela ngokutya kuluntu lwabo.
UPrato uthe: "Sizakuqhubekeka nokuyisebenzisa le mali ukuyikhupha ekuhlaleni," wongeze ngelithi baceba ukuthenga amakhadi ezipho kwizikhululo zegesi, kwaye i-HEB iza kunika nezipho.
Uninzi lokutya okulungiselelwe yi-Discada, i-Nixta kunye ne-Cuantos namhlanje ziya kusiwa kwiindawo ezifuneka kuzo, ezifana nezibhedlele, amakhaya abalupheleyo kunye namaziko okufudumeza. INixta izakusasaza uluntu ezintlanu, kwaye le nkonzo yokutya yasimahla izakuqhubeka ngolwesiHlanu nangoMgqibelo. Ezi ndawo zokutyela zamkela iminikelo ngeVenmo (@ sara-mardanbigi) yomnini-nye uSara Mardanbigi okanye iVenmo (@atxfreefridge) ngenkqubo ye-ATX Free Fridge.
IiVic & Al's, iNixta, iDisada kunye neCuantos ziindawo ezimbalwa zokutyela ezibonelela ngokutya okushushu simahla kwabo basweleyo. Iindawo zokutyela ezininzi, kubandakanya iSouthside Flying Pizza, iHestia kunye ne-OMG Squee, zilungiselele zaza zahambisa izidlo ezibhedlele, amaziko okufudumeza kunye neendawo zokufihla intloko ngoncedo lweemveliso, iinkampani kunye namaqela eehotele zalapha ezinje ngeEddy Eddy Vodka, iKendra Scott kunye neA. Koko / 365 Izinto Austin / MYLK incasa edibeneyo.
Kukho iivenkile zokutya ezibonelela ngokwazo ukutya ngelixa zinikela ngemali kumaqela endawo ngenjongo yokufumana imali. Ukuhamba nge-313 kuthengisa iipayi ezivela kwiKhampasi eseMantla kwaye kucelwe umnikelo kuAustin Mutual Aid. I-Seoul State ihambise inkukhu yasimahla ebhokisiweyo kunye nerayisi, yacela neminikelo kwizilwanyana zasekhaya zaseAustin.
Ngaphantsi kwesikhokelo sika-Adam Orman, umnini-mbini we-L'Oca d'Oro, imisebenzi elungileyo u-Austin wenze olu hlobo lomsebenzi ngasemva kwemiboniso. Umbutho uneendawo zokutyela ezininzi kubandakanya iColleen's Kitchen kunye neeGreen zaBantwana, kwaye ibibonelela ngokutya kumaziko nakwimibutho efana neAustin Public Health kunye no-EL Buen Samaritano ngeminikelo. Iqela lilungelelanise kwaye liququzelela ukutya kunye nokuhanjiswa ngokusekwe kwiimfuno zemihla ngemihla.
Xa uncedo ludinga ngokungxamisekileyo, indawo yokutyela yaseAustin iyahlangana. UPrato uthe: "Nantoni na esiyifumanayo izakuthathwa njengephenyane, kuba baninzi abantu abasweleyo, ngakumbi empuma yethu." Imalunga nokwenza kangangoko kunokwenzeka eluntwini.
Hlaziya, ngolwesiHlanu, ngoFebruwari 19, 12:23 PM: Eli nqaku lipapashwe okokuqala ngoLwesine, uFebruwari 18 lihlaziyiwe ukucacisa ubudlelwane kunye negama lomnye wabanini be-Vic & Al's